IWholelisale iTwisted Polypropylene Film Manufacturer kunye noMboneleli |Dongyuan
Le twine idla ngokusetyenziswa njenge baler, ibhinda kwakunye nokubopha itwine kwi greenhouse.Izinto zokuqala zePP ziveliswa njengephepha elisicaba kwaye emva koko lijijelwe njenge-twine enye okanye ezimbini.Le twine isetyenziselwa zombini isandla kunye nokusebenza komatshini.Usetyenziso lukho ikakhulu apho kufuneka ukubamba amaqhina olomeleleyo kunye nolwakhiwo oluthambileyo.
Intambo yefilimu yePP
Izinto eziphathekayo Ifilimu yokwahlula iPP, ifilimu yePP
Uhlobo I-1 plush, 2 i-plush
Iphakheji Ibhola, spool, coil ngaphakathi
Ibhegi elukiweyo,Ibhokisi yecala lethu
Umbala Ebomvu, emthubi, eluhlaza, eluhlaza, emhlophe, emnyama okanye njengeemfuno zabathengi
Uphawu Ukumelana nokubola, ukungunda, ukufuma kunye noqoqosho kumgangatho wayo ophezulu.
Kulula ukubopha iqhina
Isicelo sebenzisa njengebhali, ibhinder,
ukubopha intambo yesebe lomthi
ukusetyenziswa kwegreenhouse yezolimo.
Iifom zepakethe ezininzi zinokwenziwa ngokwezifiso
Siyintambo kunye nomvelisi womnatha kwiphondo laseShandong laseTshayina elineminyaka engaphezu kwama-20 yamava.Sikhethekileyo kwi-PE kunye ne-PP intambo kunye nemveliso yenetha.Iimveliso zethu zisetyenziswa ngokubanzi kwezolimo, ishishini, ukuloba, iphakheji, amazibuko kunye nezemidlalo.Inkampani iphumelele i-ISO9001 kunye nenkqubo yoLawulo ye-SGS.
I-Yantai Dongyuan ilawula ngokungqongqo yonke le nkqubo ukusuka kwimathiriyeli ekrwada yokungena kumzi-mveliso ukuya kwiimveliso ze-ex-factory.Inkampani yethu inenkqubo yokuqinisekisa umgangatho ogqibeleleyo kunye nenkqubo yokuthengisa emva kokuthengiswa.Sinebhubhoratri yethu kunye nomatshini wokuvavanya ukulawula umgangatho weemveliso.
Samkela ngokunyanisekileyo abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba bandwendwele umzi-mveliso wethu!
Ngaphambili: Ukudibanisa lula kunye nentambo ephothiweyo yePolypropylene
Okulandelayo: Intambo yepolyester ephothiweyo kwaye iphothiweyo
Intambo yePolypropylene eyi-16mm
3 4 Intambo yeStrand
4 Intambo yeStrand
Amaxabiso eentambo zePlastiki eziBlue
Intambo ephothiweyo 6mm
Intambo ye-Cargo Net
Isondlo sokubopha intambo
Ukuloba Net Rope Twine
Iplastiki yeNtsontelo yeMathiriyeli ekrwada
Intambo yePolypropylene ephothiweyo kabini
Intambo yePolypropylene 12 Mm
Polypropylene Intambo 3mm
Amandla eNtambo yePolypropylene
Intambo evela eTshayina
Into yentambo yengubo
Intambo uMekig Masin
Intambo enoKhuseleko lweUv